- केशवराज जोशी
‘यहाँ गीत गाउने को छ ?’
शिक्षकको यो प्रश्न आउनुअघि होहल्लायुक्त कक्षा कोठा एकाएक शान्त भयो । कोठामा अनौठो सन्नाटा छायो । अधिकांश विद्यार्थीहरू शिक्षकले नदेखुन् भनेर टाउको लुकाउन थाले ।
‘शिव गाउँछ सर !’
कसैको चर्को आवाजले लामो सन्नाटालाई चिर्‍यो ।
साथीले चुक्ली लाउने आसयले शिवको नाम लिएको थियो तर शिवका लागि भने त्यो ‘चुक्ली’ नै वरदान सावित भयो । वास्तवमा शिक्षक जिल्लाव्यापी गायन प्रतियोगिताका लागि आफ्नो स्कुलबाट प्रतियोगीको खोजीमा थिए ।
शिक्षकले साथीको कुरा पत्याए । जिल्लाव्यापी गायन प्रतियोगितामा शिव छनोट भए । छनोट मात्र हो र ! उक्त प्रतियोगितामा उनी प्रथम नै भए । त्यसपछि समाजले उनलाई हेर्ने दृष्टिमा व्यापक फेरबदल आयो । उनको प्रतिभाको वाहवाही हुन थाल्यो ।
बस्, त्यही विन्दुबाट उनको जीवनले बाटो भेट्टायो । अथवा भनौँ, जीवन एक फूल हो भने त्यो विन्दुबाट नै शिवले जीवनको सुगन्ध भेट्टाए ।
आफ्नो प्रतिभासँग उनको चिनजान भयो । गाउन त उनी त्यसअघि पनि गाउँथे तर त्यसपछि उनमा अनौठो आत्मविश्वास देखापर्‍यो ।
पहिलो प्रयासमै (प्रतियोगितामा सहभागिता) प्रथम भएपछि गाउनका लागि ‘फर्माइस्’ नआउने कुरै भएन । उनले पनि फर्माइस गर्नेलाई निराश किन पार्थे र ? यही शिलशिलामा उनी आफ्नो प्रतिभासित थप परिचित भए । अर्थात् आफूलाई अरू पनि थुप्रै गीतहरू गाउन आउँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो ।
त्यो समयमा शिव केवल ११ वर्षका थिए । उनकै भाषामा ११ वर्षको कलिलो उमेरमै नमस्ते खान सुरु गरेको त्यही ठिटो आज नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको स्थापित नाम भएको छ ।
२०५९ सालमा शिव रेडियो नेपालको आधुनिक गीत प्रतियोगितामा सहभागी भए । सायद गायन क्षेत्रमा उनले दोस्रो हुन जानेकै थिएनन् । आधुनिक गीत प्रतियोगितामा गजल गाएर उनी प्रथम भए ।
१ अप्रिलमा प्रतियोगिताको नतिजा आयो । उत्साहित हुँदै उनले साथीहरूलाई उक्त खबर सुनाए । साथीहरूलाई लाग्यो- शिव अप्रिल फुल मनाउँदै छ ! त्यसैले त्यो दिन साथीहरूले अप्रिल फुलको स्वादमा मजा लिए । पछि साथीको सफलतामा रमाए । उक्त प्रतियोगिता हुदा उनी १९ वर्षका थिए ।
यसअघि नै उनले मध्यमाञ्चलस्तरीय गायन प्रतियोगिताको सिल्ड उचालिसकेका थिए, जुन समय उनको उमेर केवल १३ वर्ष थियो ।
शिव परियारको दिनको सुरुवात अघिल्लो दिनको थकाल, व्यस्तता र कामको तनावले निर्धारण गर्छ र पनि सामान्यतया उनी ५ बजेसम्म उठिसक्छन् । शनिबार भने उनी अधिकांशतः ७ बजेसम्म पनि सुत्छन् ।
दैनिक नित्यकर्मपछिको ४ घण्टा उनी सङ्गीत साधना (रियाज)मा बिताउँछन् । व्यस्तता हेरी समय तलमाथि हुन सक्छ तर औसतमा दैनिक ४ घण्टा उनले रियाजका लागि छुट्याएका छन् ।
आवाजमा निखार ल्याउनका लागि र सङ्गीतको गहिराइमा डुब्नका लागि रियाज आवश्यक रहेको उनको बुझाइ छ । भन्छन्, ‘म सङ्गीतसँगै छु भन्ने महसुस गराइरहन्छ रियाजले । सङ्गीतसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढसमेत बनाउँछ ।’ त्यसैले सङ्गीत साधनालाई उनी पूजाकै रूपमा लिन्छन् ।
सर्लाहीको मूर्तियामा जन्मिएका शिवको परिवार उनी ३ वर्षको भएपछि हजुरिया सर्‍यो । उनले एसएसलीसम्मको अध्ययन हजुरियामै पूरा गरे । स्कुलको पढाइ पूरा गरिसकेपछि थप अध्यनका लागि काठमाडौं आए ।
काठमाडौं आएपछि ललितकला क्याम्पसबाट अध्ययन अगाडि बढाएका उनले विविध कारणले पढाइलाई निरन्तरता दिन सकेनन् ।
आईएको रिजल्ट आएको दिन क्याम्पसको सिँढीमा उनको विजय महर्जनसँग भेट भयो । विजयले उनलाई भनेछन्, ‘शिव, मैले टप्नुपर्ने तिमीले टपेछौ नि !’
शिवले अरू विषयमा राम्रो नम्बर ल्याएका थिए तर अंग्रेजीमा २९ नम्बर ल्याएर फेल भएका थिए । त्यसैले औसत नम्बरले शिवले टप गरे पनि उनी एउटा विषयमा फेल भएकाले वास्तविक टपर विजय नै थिए ।
देश, विदेश घुम्दै आएका शिवको अंग्रेजीमा अहिले पनि सुधार छैन रे !
बुबाको नाम गलत भएकाले बीए पढेनन्
एसएलसीको सर्टिफिकेटमा बुबाको गलत नाम परेछ । उनले जे सुने, त्यही लेखे । उनलाई वास्तविक नाम कसैले बताएनन् । तर, नागरिकताबमोजिमको नाम सच्याएर ल्याउँदासम्म सँगैका साथीहरू बीएमा पुगिसकेका थिए । त्यसैले उनलाई भाइपुस्ताका साथीहरूसित बसेर पढ्न मन लागेन ।
त्यस्तै, पहिलाको जस्तो जोश जाँगर पनि रहेन पढ्न । काठमाडौंमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने र आत्मनिर्भर भएर बाँच्नुपर्ने बाध्यताले पनि पढाइलाई निरन्तरता दिन दिएन भन्छन् शिव ।
घरबाट निरन्तर र नियमित रूपमा पैसा पठाउन सकिने अवस्था थिएन । त्यसैले ट्युसन पढ्न सकिने अवस्था पनि भएन । ट्युसनविना अंग्रेजी पास गर्न सकिन्छ जस्तो लागेन उनलाई ।
यी र यस्तै ‘प्रतिकूलता’का कारण उनले औपचारिक अध्ययनलाई बीचमै छाडे तर सङ्गीतको अध्ययनलाई भने थप प्राथमिकतासहित अगाडि बढाए । सङ्गीतको अध्ययन उनको गायनमा पनि झल्किन्छ ।
अहिले गम्भीर देखिने र एकएक शब्द जोखेर मात्र बोल्ने स्वभावका शिव पहिले निकै चकचके थिए रे ! यही स्वभावको कारण अरूले गरेका गल्तीको अपजस लिनुपरेका कयौँ अनुभव छन् उनीसित ।
अहिले भने उनी सानो कुरा बोल्दा पनि त्यसको सम्भावित असरबारे सोचेर मात्र बोल्ने गर्छन् । आफ्ना शब्दले कसैको भावना वा कसैको संवेदनामा असर त पर्दैन ? भन्नेमा सचेत भएको बताउँछन् उनी ।
भन्छन्, ‘मेरा कारण वा मैले बोलेका कारण कसैको चित्त कनि दुखाऊँ ?’
शिवमा सानैदेखि नै साङ्गीतिक चेत थियो तर यसका प्राविधिक पक्षको जानकारी थिएन । सङ्गीतको ज्ञान उनले गान्धर्व सङ्गीत महाविद्यालयबाट लिए । गुरु थिए- चन्दनकुमार श्रेष्ठ, जो प्रसिद्ध ग्वालियर घरानाबाट प्रशिक्षित थिए ।
अनि सुरु भयो गीत रेकर्डिङ
शिवको पहिलो रेकर्ड भएको रचना ‘जति बिर्सियो तिम्रो याद आउन खोज्छ किन होला ?’ नै हो, जुन रेडियो नेपालको आधुनिक गीत प्रतियोगितामा प्रथम स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो । सुरेश वाग्लेको शब्द रहेको उक्त गजलमा उनको आफ्नै सङ्गीत थियो ।
२० चैत २०५९ मा रेडियो नेपालको वार्षिकोत्सवमा आयोजित आधुनिक गीत प्रतियोगिताको नतिजा आएसँगै उनले नगद, स्वर्णपदकसहित रेडियो नेपालको ए ग्रेडको गायकको उपाधिसमेत हात पार्न सफल भए ।
त्यसैअनुरूप रेडियो नेपालको स्टुडियोमा ४ वैशाख २०६० मा उक्त गजल रेकर्ड भयो, जसले उनलाई नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा शिव परियार भन्ने गायक पनि छ है भनेर औपचारिक ढंगले चिनाउने काम गर्‍यो ।
‘फेवातालमा साइँली’ बोलको लोक-आधुनिक गीतले उनलाई पहिलेको अवस्थाबाट जुरुक्क उठाएर नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा उनलाई बेग्लै पहिचान दिलाउन सफल भयो । यो गीत २०६१ सालमा रेकर्ड भएर २०६२ सालमा रिलिज भएको थियो ।
वास्तवमा शिव शास्त्रीय सङ्गीतको पृष्ठभूमिबाट आएका थिए । उनी राग, अलङ्कार, सरगमको साधनामा व्यस्त रहने व्यक्ति थिए । तर, उक्त गीत मध्यपश्चिम नेपालको लोकभाका थियो, जुन गीत गाउन उनका लागि सजिलो थिएन ।
नयाँ र तुलनात्मक रूपमा कम परिचित क्षेत्रमा हात हाल्दा सुरुमा सुर नलाग्नु स्वाभाविकै थियो । तर, यस गीतका लागि उनले धेरै नै मिहिनेत गरे । सुर नलागेपछि सुरुवातमा उनी गीत रेकर्ड नै नगरी फर्किए ।
त्यसपछि १० दिन अभ्यास गरेर मात्र रेकर्ड गराए । गीतले मिहिनेतको फल पनि दियो । गीत चल्यो ।
विक्रमको २०६० को दशकको सृुरुवातमा आधुनिक सङ्गीत सुस्ताएको अवस्था थियो । लोक गीतप्रति विस्तारै अनुराग बढ्दै गएको अवस्था थियो श्रोताको ।
पप, हिपहप र रिमिक्सको वर्चस्व थियो । त्यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि यस गीतले आफ्नो बाटो बनाउँदै गयो । अर्थात् गीत सफल भयो ।
लोक-आधुनिकको शैलीमा गाइएको यो गीतले गायकलाई सामाजिक र आर्थिक रूपमा माथि उठाउने काम गर्‍यो । त्यसपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन । त्यही अवधिबाट नेपाली सङ्गीतमा कायम भएको उनको वर्चस्व अहिलेसम्म कायमै छ ।
कतै आत्मसन्तुष्टि, कतै आर्थिक सन्तुष्टि
जनक पौडेलको शब्द रहेको ‘अलिकति नजर तिम्रो झुकाएर आऊ’, शीतल कादम्बिनीको शब्द रहेको ‘धेरैचोटि मरेँ म त धेरैचोटि बाँचेँ’, ‘सङ्गी डुब्दै छु तिम्रो यादमा’ जस्ता गीत÷गजलहरू उनी आफैँलाई सन्तुष्टि दिने खालका सिर्जना हुन् ।
भन्छन्, ‘शिव परियार कस्तो खालको गायक हो ? भन्ने बुझ्नका लागि यी ३ गीत सुने पुग्छ ।’
‘क्या दामी छ’, ‘पिलायो साथीले’, ‘पाकेको फल मीठो’लगायतका गीत÷गजलहरूलाई उनी रमाइला सङ्गीतको कोटीमा राख्छन् ।
‘सङ्गीतको गुणात्मकतामा यसको योगदान कस्तो रह्यो ? वा रहेन ? त्यो फरक कुरा हो तर सर्जकजलाई टिकाइराख्न यस्ता सङ्गीतको विशेष भूमिका रहन्छ’, शिव भन्छन्, ‘टेक्ने आधार तयार पार्न र त्यसको आधारमा राम्राराम्रा गीत-सङ्गीत निर्माण गर्ने जमिन तयार पार्न यस्ता गीत-सङ्गीतको पनि त्यतिकै महत्त्व छ ।’
घरको जग जमिनभित्र हुन्छ तर जग देखिँदैन भनेर त्यसको भूमिकालाई नकार्न पनि सकिँदैन । घर त्यही नदेखिने जगमा ठडिएको हुन्छ । त्यसैले सर्जकाका लागि सबै खालका गीत-सङ्गीत महत्त्वपूर्ण हुन् भन्ने उनको मान्यता छ ।
त्यस्तै, ‘आँसुको अर्थ’, ‘नभेटी नभेटी’, ‘कहाँ थियौ तिमी रङ्गमञ्च छुटेपछि आयौ’लगायतका गीत÷गजललाई उनी सदावहार आधुनिक गीतको श्रेणीमा राख्छन् । यस्ता सिर्जनाले सर्जकलाई पछिसम्म बचाइराख्छन् भन्ने उनको मान्यता छ ।
जो नजिक हुन्छन्, तिनैले दुखाउँछन्
नजिक रहनेलाई आफ्ना कमी कमजोरी थाहा हुन्छ । त्यसैले कुनै समयमा अत्यन्त निकट मानिएका र विश्वास गरिएकाहरूले नै दुखाउने गरेको उनको अनुभव छ । एउटा लेवलमा पुगिसकेपछि खुट्टा तान्ने र गिराउन खोज्नेहरूको समेत कमी नरहेको उनी बताउँछन् ।
जीवन र सङ्गीतबारे बुझाइ
शिवका लागि जीवन ईश्वरको सुन्दर उपहार हो । प्रकृतिको सबैभन्दा सुन्दर फूल हो भने सङ्गीत सो फूलमा रहेको सुगन्ध । त्यसैले जीवन सङ्गीतबारे उनको बुझाइ सपाट छ र एकआपसमा गाँसिएर आएको छ ।
आफूमा सङ्गीतको आंशिक ज्ञान मात्र रहेको बताउने शिव अहिले आफूले एक तह भने पार गरेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिलेसम्म सङ्घर्षको चरण थियो, अब जिम्मेवारीको चरणमा प्रवेश गरेको छु । यो अवस्थाबाट आफूले सिकेको ज्ञानलाई इमान्दार र जिम्मेवार भएर उपयोग गर्ने सोचमा छु ।’
शिवलाई आर्थिक उपलब्धि केही दिन र केहीछिनका लागि मात्र हो भन्ने लाग्छ रे ! साथै यो कुरा जसले पनि प्राप्त गर्न सक्छ जस्तो पनि लाग्छ रे !
‘त्यसैले त्यो चिज जतन गरेर राख्न सक्नुपर्छ, जुन आफूसँग मात्र छ र जसले आफू भौतिक रूपमा यो दुनियाँमा नरहँदा पनि कसै न कसैको मन-मुटुमा बचाइराख्छ । कसैको हृदयमा धड्काइरहन्छ’, शिव भन्छन्, ‘मेरालागि त्यो चिज सङ्गीत हो, जसको जगेर्ना वहुत सजगतापूर्वक गर्दै अगाडि बढेको छु ।’
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन ३१, २०७७, १३:०७:००